FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTatar IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Iblue-and-yellow macaw. Ubude: iziisentimitha eziyi-85
IMIBALA eqaqambileyo ivela phezu kwemithi yehlathi njengoko iqela leentaka liqalisa ukubhabha! Lo mbono mhle watsala abahloli bamazwe baseYurophu abafika kuMbindi noMzantsi Merika ekupheleni kweminyaka yoo-1400. Babebona izikhwenene ekuthiwa ziimacaws ezinezisila ezide ezifumaneka kwimimandla yetropiki yoMntla noMzantsi Merika. Kungekudala, imifanekiso yezi zidalwa zimangalisayo yayikwiimapu zalo mmandla njengophawu lweparadesi eyayisandul’ ukufunyanwa.
Iinkunzi neemazi zezi zikhwenene ziqaqambile ngemibala, nto leyo engaqhelekanga kwiintaka ezinemibalabala. Iimacaws ziintaka ezikrelekrele, ezithanda ukuhlala kunye ezenza ingxolo ehlabayo ezindlebeni. Iqela ngalinye liba neentaka ezimalunga ne-30, kwaye zishiya iindlwana zazo kwakusasa ukuze ziye kutya iinkozo, iziqhamo zeetropiki nezinye izinto ezizityayo. Njengezinye izikhwenene, ezi ntaka zisebenzisa iinzipho zazo ukuze zibambe ukutya, zikufake kuloo milomo yazo mikhulu. Ziyakwazi nokuvula amaqokobhe aqinileyo amandongomane! Emva kokutya, zidla ngokubhabha ziye emaweni okanye phezu kwemilambo zize zitye udongwe, nto leyo esenokuba izinceda zihlise ityhefu ekwizinto ezizityileyo kwaye zifumane nezimbiwa ezizidingayo.
“[UThixo] yonk’ into uyenze yantle ngexesha layo.”—INtshumayeli 3:11.
Iinkunzi neemazi zeemacaw zidla ngokuhlala kunye ubomi bazo bonke, zincedisane ekunyamekeleni amantshontsho azo. Iindidi ezahlukeneyo zakha iindlwana zazo kwimingxuma esemithini, kwimingxuma ekwiindonga zemilambo nakwiziduli, okanye kwiimfanta nakwiintanda zamawa, apho inkunzi nemazi zinokubonwa zisusana iintakumba. Nangona amantshontsho eba sele ekhule ngokupheleleyo kwiinyanga ezintandathu, ahlala nabazali bawo malunga neminyaka emithathu. Iimacaw zasendle ziphila phakathi kweminyaka eyi-30 neyi-40, kodwa ezinye zezo ziselugcinweni ziye zaphila iminyaka engaphezu kweyi-60. Kukho malunga neendidi eziyi-18 zezi ntaka, ibe ezinye zazo ziboniswe apha.
Igreen-winged macaw, ekwabizwa nangokuba yimacaw ebomvu naluhlaza. Ubude: ukuya kutsho kwiisentimitha eziyi-95
Iscarlet macaw. Ubude: iziisentimitha eziyi-85
Ihyacinth macaw. Ubude: ukuya kutsho kwiisentimitha eziyi-100. Sesona sikhwenene sikhulu sinobunzima obungaphezu kwe-1,3 kg